‘दानवीर’ चाैधरीले ५ हजार ६ सय सर्वसाधारणलाई यसरी पारे अलपत्र - » खबरहरुको एउटै केन्द्र
‘दानवीर’ चाैधरीले ५ हजार ६ सय सर्वसाधारणलाई यसरी पारे अलपत्र –
सोमबार, माघ १७, २०७३ १०:४२ मा प्रकाशित !
अर्बपति विनाेद चाैधरीकाे नेतृत्वमा रहेकाे चाैधरी ग्रुपकाे सीजी कम्युनिकेशनले ६ हजार ग्राहकलाई अलपत्र पारेकाे छ । पाँच हजार ८ सय ३४ हजार नेपाली ग्राहक रहेकाे टेलिफाेन सेवा प्रदायक कम्पनी बन्द गरेपछि उनीहरु अलपत्र परेका हुन् ।
अार्थिक दैनिकका अनुसार ५२ जिल्लामा सेवा दिने गरी संचालनमा अाएकाे सीजी कम्युनिकेशन सेवामा भिसेट (ल्याण्डलाइन)मार्फत पाँच हजार दुई सय,जीएसएम माेबाइलका १ सय ५५ र इन्टरनेटका दुई सय ग्राहक रहेका छन् ।
विगत एक वर्षदेखि सेवा बन्द गरेपछि ग्राहकहरुले फाेनकाे लागत खर्च पाउनु पर्ने वा सेवा सुचारु हुनुपर्ने माग गरेपनि चाैधरी ग्रुपले सुनेकाे छैन । नाफाकाे लागि सर्वसाधरणकाे ढाेकाभित्रै पुग्ने चाैधरी ग्रुपले सर्वसधारणकाे लागत खर्चबारे पूरै बेवास्ता गर्दै अाएकाे छ ।
सर्वसधारणकाे मागकाे सुनुवाइ गर्न छाेडेर विनाेध चाैधरीका छाेराकाे नाममा रहेकाे कम्पनीकाे सेयर छापामारे शैलीमा अर्काकाे नाममा नामसारी गरेकाे छ । विवादबाट उम्कन २०७३ साउन ११ गते सुरेशराज घिमिरेका नाममा उक्त सेयर नामसारी गरिएकाे छ ।
अरुकाे नजरमा दानवीर देखिएका चाैधरीले त्यही कम्पनीमा कार्यरत कार्मचारीहरु विगत एक वर्षदेखि अान्दाेलनमा रहेपनि उनीहरुकाे कुनै सुनाइवा गरेका छैनन् । उनी फाेर्ब्स पत्रिकाले एसिएका ४० दानवीरकाे सूचीमा नेपालका विनाेध चाैधरीकाे नाम पनि समावेश गरेकाे छ ।
नेपालका नेताका ‘दानवीर’पनि भएकाले विनाेध चाैधरीका गलत र मनपरी कार्यलाई कुनै पनि कानुनले देख्न सकेकाे छैन ।
PREVIOUS POST Previous post: नेपालकै उदाहरणीय विद्यालय खाेटाङमा
NEXT POST Next post: लेखा समितिको सभापतिमा डोरप्र्रसाद
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, माघ १७, २०७३ १०:४२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, माघ १७, २०७३ १०:४२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, माघ १७, २०७३ १०:४२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, माघ १७, २०७३ १०:४२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, माघ १७, २०७३ १०:४२